I-China Hexaphenoxycyclotriphosphazene Manufacture and Factory | Ukuxubeka
Ifomula Yamamolekhula: C36H30N3O6P3
Ukubukeka: White crystalline powder
I-Hexaphenoxycyclotriphosphazeneine-P ehlukile, isakhiwo se-hybrid, esibonisa ukuqina okuphezulu kokushisa, ukubuyisela emuva ilangabi, inkomba ye-oxygen ekhawulela kakhulu (i-LOI) nokusebenza komusi ophansi. Kuyinto eyengezelayo i-halogen-free flame retardant. Isetshenziswa kabanzi ku-epoxy resin, i-clad laminate egqokiwe, i-diode ekhanyisa ukukhanya kwe-LED, ukumboza i-powder, okokubhaka izinto kanye ne-polymer material. Luhlobo lwezinto zokucisha umlilo ezinhle kakhulu nokuzicisha
Lo mkhiqizo i-halogen-free flame retardant, esetshenziswa kakhulu ku-PC, PC / ABS resin, PPO, inayiloni neminye imikhiqizo. Lapho lo mkhiqizo usetshenziswa ku-PC, lapho okuqukethwe kwe-hpctp kungu-8-10%, ibanga elibuyisa ilangabi lomkhiqizo lifinyelela ku-FV-0; lo mkhiqizo futhi unomphumela omuhle we-flame retardant ku-epoxy resin, futhi ungasetshenziselwa ukulungiselela i-EMC ukupakisha okukhulu kwesekethe okuhlanganisiwe, futhi ukusebenza kwayo kwelangabi kungcono kakhulu kunalokho kohlelo lwendabuko lwe-phosphorus bromine flame retardant; lo mkhiqizo ungasetshenziswa ku-Benzoxazine Resin glass glass laminate, futhi uma okuqukethwe kwe-hpctp kungu-10%, ibanga elibuyisela ilangabi lifinyelela ku-FV-0 Umkhiqizo ungasetshenziswa ku-polyethylene, inani le-LOI le-flame retardant polyethylene impahla lingafinyelela ku-30 ​​~ 33 ; umkhiqizo ungangezwa kusixazululo se-viscose fiber spinning ukuthola i-viscose fiber enelangabi eline-index ye-oxidation engu-25.3 ~ 26.7
Lo mkhiqizo uhlobo lwenhlanganisela ene-P no-N njengamathambo ayisisekelo. Isakhiwo saso sizinzile, futhi ayikho inkinga yokungcola kwe-halogen. Lapho isha, empeleni ayikho igesi enobuthi futhi azikho izinhlekelele zesibili.
Ingasetshenziswa futhi kumakhemikhali awuketshezi angokwemvelo, futhi ikwazi ukubekezelela izinga lokushisa eliphakeme, amanzi namafutha isikhathi eside.
It has a ilangabi retardancy ezinhle futhi kwalokho kancane. Ngokuvamile, lapho okuqukethwe yi-BDP kungu-8-10%, ibanga lomlilo elikhuthaza ilangabi lingafinyelela ku-FV-0, okuyi-50% ye-BDP ne-RDP.
Ngenxa yesakhiwo esizinzile nenani elincane lezithasiselo, izakhiwo zemikhiqizo nezinye izinto azishintshiwe ngesikhathi sokusetshenziswa.
Lo mkhiqizo i-crystal emhlophe. Ayidingi ukufudunyezwa ngesikhathi sokusetshenziswa, futhi ayidingi ukupakisha okukhethekile kokuhamba. Kulula kakhulu ukusetshenziswa nokuhamba.
Ukupakisha: 20kg / isikhwama
Amandla wonyaka: Amathani ayi-500 / ngonyaka
Olandelayo: I-Poly (diphenoxy) phosphazene
I-Poly (diphenoxy) phosphazene